ဇိုင်နဘ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇိုင်နဘ်ဘေကွဘ်ရာသခင်မကြီး(စ.အ)သည် အလီအိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်(အ.စ)နှင့်ဖှာသေမာသခင်မကြီး(စ.အ)တို့၏ သားသမီးများအတွင်းမှ တတိယမြောက်ဖြစ်လေသည်။ သခင်မကြီးသည် ရှီအာတို့၏ အလွန်မှပင် အလေးပေးအထွဋ်အမြတ်ထားခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရှီအာတို့သည် ထိုသခင်မအား ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇိုင်နဘ်ဟု တမ်းတခေါ်ကြလေသည်။ ဇိုင်နဘ်သခင်မ(စ.အ)သည် ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ နှမတော်ဖြစ်ပြီး ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်တွင် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့ပြီး အကြောင်းစုံအား မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့နောက် သခင်မကြီး(စ.အ)သည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလေသည်။ သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ရှီအာတို့၏လေးပါးမြောက် ခေါင်းဆောင်(အေမာမ်) အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အတိုင်း အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသလို မိမိ၏နောင်တော်ဘက်မှ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့သူလည်းဖြစ်လေသည်။ ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၁)ခုနှစ် ၊ ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၂)ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်တော်မူခဲ့လေသည်။ သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်နှင့် ထိမ်းမြားခဲ့ပြီးနောက် သား(၃)ဦးနှင့် သမီး(၂)ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၀)ခုနှစ် ၊ ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၁)ခုနှစ်တွင် နောင်တော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်အတူ ကရ်ဘလာသို့လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ နောင်တော် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ရှဟီးဒ်ဖြစ်(အသတ်ခံရ)ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သခင်မကြီး(စ.အ)သည် တူတော် အလီအိဘ်နေဟိုင်းန်(အ.စ)အား ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ အထူးစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် (ကဟ်ရမားန်-နေ-ကရ်ဘလာ) ကရ်ဘလာသူရဲကောင်း ဘွဲ့တော်ကို ဆောင်ခဲ့လေသည်။
၄ ယဇီးဒ်နှင့်အပေါင်းအပါများရှေ့တွင် ခြွေခဲ့သော မိန့်ခွန်း
ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ဟီဂျရီသက္ကရာဇ်(၅)ခုနှစ် (အေဒီ၆၂၇ခုနှစ်) သို့မဟုတ် ဟီဂျီရီသက္ကရာဇ် (၆)ခုနှစ်(အေဒီ ၆၂၈) ခုနှစ်တွင် မဒီနာမြို့တော်၌ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့လေသည်။ ရှီအာတို့ဆင့်ပြန်ထားသော (ရေဝါယသ်)အထောက်အထားဆင့်ပြန်မှုများအရ သခင်မကြီးဇိုင်နဘ်(စ.အ)ဖွားမြင်တော်တော်မူချိန်တွင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် ခရီး၌ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် မယ်တော်ဖှာတေမာသခင်မကြီး(စ.အ)မှ ဖခမည်းတော်အလီ(အ.စ)အား သမီးတော်လေးအား အမည်ပေးရန် တောင်းခံလာခဲ့သည့်အခါ ခမည်းတော်မှ "ကျွန်ုပ်သည် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အား ကျူး၍ မည်သည့်လုပ်ရပ်ကိုမျှ မလုပ်ဆောင်လိုကြောင်းနှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ပြန်လာသည်အထိ စောင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ခရီးမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်အခါ သမီးတော်မှ သမီးလေးတစ်ပါးဖွားမြင်ခဲ့ကြောင်းကို အလီ(အ.စ)၏ နုတ်တော်မှ ကြားသိတော်မူခဲ့သည့်အခါ "သမီးတော်ဖှာသေမာ(စ.အ)၏သားသမီးများသည် ကျွန်ုပ်၏သားသမီးများသာလျှင် ဖြစ်ပေတော်မူ၏။ သို့သော် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာတို့တွင် အဆုံးအဖြတ်သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှသာလျှင် ဖြစ်တော်မူ၏" ဟုမိန့်တော်မူခဲ့လေသည်။(နာစေခ်-ခေ-သဝါရီးခ် - ဇိုင်နဘီယာအတွဲ / စာ-၄၇) ထိုသို့ဖြင့် ဂျီဘ်ရာအီလ်(ကောင်းကင်တမန်ကြီး)သည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှ ဗြာဒိတ်တော်ကို ယူဆောင်ကာ ဆင်းသက်လာခဲ့လေပြီး " (အိုတမန်တော်) အရှင်မြတ်သည် အသင့်အား ဆလာမ်(မေတ္တာ)ပို့သ၍ အမိန့်တော်ချမှတ်ခဲ့လေသည်မှာ ဤကလေးငယ်၏ အမည်နာမအား ဇိုင်နဘ် ဟု မှည့်ခေါ်ပါလေ။ ထို့အပြင် ၎င်းအမည်အား "လောင်ဟေမဟ်ဖူးဇ်"တွင် ငါအရှင်မြတ် ရေးမှတ်ခဲ့ပြီးချေပြီ" ဟုဖြစ်လေသည်။ ထိုအခါ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် သခင်မကြီးဇိုင်နဘ်(စ.အ)အား ပွေ့ချီကာ နမ်းလျှက် မိန့်တော်မူလေသည်မှာ "ဤသမီးတော်အား အသင်တို့အားလုံး အရိုအသေပေးပါဟု ကျွန်ုပ် မှာကြားလိုပါ၏ ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမသည် ခဒီဂျာသခင်မကြီး(စ.အ)ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လေသည်။ သုဖြစ်သည်။(ခစာအိစ်စွလ်ဇိုင်နဘီယာ စာ-၁၅)
ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အရွယ်ရောက်လာခဲ့သည့်အခါ အလီ(အ.စ)နှင့် တူတော်စပ်သူ အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်နှင့် ထိမ်းမြားခဲ့လေသည်။ ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်ထက် ငါးနှစ်မျှငယ်၏။
ထို့နောက် အလီ ၊ အောန် ၊အဘ္ဘားစ်၊ မိုဟမ္မဒ် အမည်ရှိသော သားတော်(၄)ဦးနှင့် အွမ်မေကွလ်စူးမ်အမည်ရှိသည့် သမီးတစ်ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။၎င်းတို့အတွင်းမှ အောန်နှင့်မိုဟမ္မဒ်တို့သည် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲတွင် ရှဟီးဒ်ဖြစ်(ကျဆုံး)သွားခဲ့ကြလေသည်။
ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ဂျမာဒိလ်အောင်ဝလ်လ(၅)ရက်နေ့ ဟိုဒိုင်ဘီယာစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးသည့်အချိန်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့လေသည်။ သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)ထက် (၂)နှစ် ငယ်၏။ သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် ရက်ပေါင်းများစွာ ရှာမ်(ဒမတ်ကစ်)မြို့တွင် နေခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ကျန်အမျိုးသမီး စစ်သုံ့ပန်းများနှင့်အတူ မဒီနာမြို့တော်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။
ယဇီးဒ်နှင့်အပေါင်းအပါများရှေ့တွင် ခြွေခဲ့သော မိန့်ခွန်းပြင်ဆင်
ကရ်ဘလာ၌ရှိနေသော ဇိုင်နဘီယာဟ် ကုန်းမြင့်
ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ကရ်ဘလာ အဖြစ်အပျက်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက် စစ်၌ကျဆုံးရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့သူတို့၏ ဦးခေါင်းများနှင့်အတူ မိမိတို့အား ရှာမ်မြို့သို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာချိန်တွင် ယဇီးဒ်၏ရှေ့မှောက်သို့ရောက်သောအခါ အလွန်ပင် ပြင်းထန်သော မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်ကို ခြွေခဲ့လေသည်။ ထိုမိန့်ခွန်းသည် သခင်မကြီး(စ.အ)၏မိန့်ခွန်းများအနက် အလွန်ပင် ထိရောက်ပြီး မိမိ၏နောင်တော် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)သည် အမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းကို ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့သော မိန့်ခွန်းဖြစ်ပေသည်။ သခင်မကြီးဇိုင်နဘ်(စ.အ)သည် ယဇီးဒ်ရှေ့သို့ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် မတ်တတ်ရပ်ကာ ရဲဝံ့စွာဖြင့် ပြောဆိုလေသည်မှာ-"အိုယဇီးဒ် ..အသင်သည် ငါတို့အား ယခုလို အကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ထွက်ပေါက်မရှိလေရန် ပိတ်ဆို့ ခဲ့ပြီး သုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာမှုသည် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်၏ရှေ့မှောက်တွင် အသင့်အဖို့ အလွန်ပင် သိက္ခာရှိစေပြီး ငါတို့အတွက် အလွန်သိက္ခာမဲ့သွားစေသည်ဟု အသင်တွေးထင်နေပါသလော? အသင်သည် မိမိ၏အဘိုးတော်များနှင့် ဆုံးမက်ရန်အတွက်မသွားမီ(မသေမီ) ငါသည်စွန့်အနေခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဤသို့ပြောခဲ့မည်မဟုတ်၊ဤသို့လုပ်ခဲ့မည်မဟုတ်ချေဟု အမြန်ဆုံးနောင်တ တရားရပါလေ အိုယဇီးဒ်..အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အားကျိန်ဆို၍ ပြောလိုပါ၏ .. အသင့်၏ ဤလုပ်ရပ်သည် မိမိ၏အသားကို မိမိကိုယ်တိုင်လှီးဖြတ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ အိုယဇီးဒ်..အသင်သည် ကောက်ကျစ်လိုသမျှကောက်ကျစ်ပါလေ၊ ရှိသမျှအင်းအားကို အစွန်းကုန်အသုံးပြုပါလေ သို့သော် မည်သည့်ပုံစံနှင့်မျှ ငါတို့၏နာမတော်များနှင့် ငါတို့အား တမ်းတသတိရခြင်းကို လူတို့အကြားမှ ဖြောက်ဖျက်၍ ရနိုင်မည်မဟုတ် ဟု အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်အား ကျိန်ဆို၍ ပြောရဲပါသည်။ ထိုအတိုင်းပင် အသင့်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလည်း မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ (သမိုင်းတွင်)ဖြောက်ဖျက်၍ ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ အသင့်၏ အင်အားကြီးမှုသည် ရက်အနည်းငယ်အတွက်သာဖြစ်ပေသည်။ အသင့်၏နောက်လိုက်များသည်လည်း အုပ်စုကွဲသွားကြပေလိမ့်မည်.. အမှန်တရားဘက်မှ အသံပေးလာသောနေ့ရက်တွင် အလ္လာဟိုအရှင်မြတ်၏ အမျက်တော်ဆူးရှမှုသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူတို့အပေါ်ကျရောက်ပါစေသား..
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမက်စ်ကစ်မြို့ရှိ သခင်မကြီးဇိုင်နဘ်(စ.အ)ဂူဗိမ္မာန်တော်
မြောက်များစွာသော သမိုင်းသုတေသီ ပညာရှင်များက အထူးသဖြင့် မက်စ်အူဒီ မှ သခင်မကြီး(စ.အ) သည် မဒီနာမြို့တွင် ကွယ်လွန်တော်မူပြီး မဒီနာမြို့ရှိ ဘကီးဟ် သင်္ချိုင်းတွင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားလေသည်။ သို့သော် အချို့က ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၂)ခုနှစ်တွင် မဒီနာမြို့၌ ဟွရ်ရာဟ်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှုများ ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့် မိမိကြင်ယာတော်အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်မှ ဆီးရီးယားဒေသတွင် မြေနေရာအချို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ထိုဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရဂျဘ်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ထိုနေရာ၌ပင် ကွယ်လွန်တော်မူသွားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြလေသည်။
သခင်မကြီး(စ.အ)သည် မိမိ၏နောင်တော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)ကဲ့သို့ သက်တော် ၅၆ နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်တော်မူခဲ့လေသည်။
သမင်ကြီး(စ.အ)၏ဂူဗိမ္မာန်တော်တည်ရှိရာ နေရာကို ယခင်က "ရာဝီယာဟ်"ဟုခေါ်ခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ထိုနေရာဒေသကို " ဇိုင်နဘ်ဘီယာဟ် "ဟုခေါ်ကြလေသည်။ တချိန်က ထိုဒေသသည် ရွာတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ မြို့အတွင်း၌ ပါဝင်လာခဲ့လေသည်။ ထိုဒေသသည် ဒမက်စ်ကစ်မြို့ဟောင်း၏ အရှေ့ဘက် စွန်းစွန်း (၇)ကီလိုမီတာအကွာ လေဆိပ်ဘက်သို့သွားသည့် လမ်းတွင် တည်ရှိသည်။
ထိုဗိမ္မာန်တော်သို့သွားရာလမ်းမကြီးမှ ဗိမ္မာန်တော်၏ (ဂွန်ဘသ်တော်)အမိုးခုံးကို အဝေးမှ လှမ်းမြင်တွေ့နေရပေမည်။ ထိုအမိုးခုံးသည် ရွှေများလောင်း၍ ရွှေရောင်ခြယ်ထားပြီး ဗိမ္မာန်တော်၏အရှေ့ မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တို့တွင် မြင့်မားသော မျှော်စင်(မေနာရာ)နှစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားသည်။
ဗိမ္မာန်အတွင်း၌ လက်မှုပန်းကနုတ်များဖြင့် ပြည့်နက်အောင် အလှဆင်ထားမှုများကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ထိုပန်းကနုတ်များသည် ယခုခေတ် အုပ်ကြွပ်ပေါ်၌ ကြွေရည်သွန်းလောင်းကာ ပန်းဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့မြင်တွေ့နေရသောလက်မှုပညာသည် အစ်ဖဟာန်းမြို့မှ ဆရာကြီးအလီပန်ဂျာဟ်ပူးရ်၏ လက်မှုပညာများပင်ဖြစ်လေသည်။ ထိုဆရာကြီးသည် (၁၀)ခန့်အပင်ပန်းခံကာ အစ်ဖဟာန်းဗိသုကာ လက်ရာများဖြင့် ထိုဗိမ္မာန်တော်ကို အလှဆင်ခဲ့လေသည်။
အနောက်ဘက် မုဝ်ဦးမှဝင်ရောက်မည်ဆိုပါက ညာဘက်အခြမ်းတွင် အခန်းငယ်လေးတစ်ခန်းရှိသည်။ ထိုအခန်းငယ်လေးအတွင်း၌ အုတ်ဂူသုံးခုကို မြင်တွေ့ရပေမည်။၎င်းတို့အတွင်းမှ ပထမတစ်ခုသည် ဟီဂျရီ ၁၃၉၇ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော ဟိုစိုင်းန်ယူစွဖ်-ဖေ-မက္ကီ၏ အုတ်ဂူဖြစ် လေသည်။ ထိုအတွင်းမှ ဒုတိယတစ်ခုသည် အအ်ယားန်နွတ်ရှီအာဟ် ကျမ်းကို ပြုစုရေးသားခဲ့သော မိုဟ်စင်န်နွလ်အမီန်းနေအာမိုလီ၏ အုတ်ဂူဖြစ်ပြီး တတိယတစ်ခုသည် မိရ်ဇာတကီ ဘေဘဟာနီ၏သမီးတော် အုတ်ဂူပင်ဖြစ်ပေသည်။
သခင်မကြီး(စ.အ)၏ဗိမ္မာန်တော် ပရဝုဏ်သည် လေးထောင့်သဏ္ဌာန်ဖြစ်၍ အုတ်ဂူနှင့် အုတ်ဂူကို မိုးထားသော အမိုးခုံး(ဂွန်ဘသ်တော်)သည် ထိုပရဝုဏ်၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် ရှိနေပေသည်။ ဗိမ္မာန်တော်အတွင်းသို့ ဝင်သည့် မုဝ်ဦး အဝင်ပေါက် လေးခုရှိပေသည်။ အုတ်ဂူအပေါ်တွင် တည်ရှိသော ရွှေရောင်အမိုးခုံးပေါ်တွင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှ မုက္ခပတ်တော်များကို ရေးထွင်းထားသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရပေမည်။ အမိုးခုံးအား ရွှေလောင်း၍ အလှဆင်ခြင်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ်များတွင် အီရန်မှ တာဝန်ယူပြုလုပ်ပေးခဲ့လေသည်။
ဗိမ္မာန်တော်၏ အရှေ့ဘက်တွင် မိုဆွလ္လာဟ်-ယေ-ဇိုင်နဘီယာဟ်(ဇိုင်နဘီယာဟ်ဝတ်ကျောင်းတော်)ကို ဆီးရီးယားဆိုင်ရာ အီရန်ခေါင်းဆောင်၏ကိုယ်စားလှယ်မှ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထိုဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်း နမာဇ်-ဇေ-ဂျမာအသ်၊ ဂျွန်မ်အာဟ်နမားဇ်နှင့် ဒိုအာ-ယေ-ကိုမိုင်းလ်ဖတ်ခြင်း စသဖြင့်အစီအစဉ်များကို ကျင်းပလျက် ရှိနေပေသည်။ ထိုဝတ်ကျောင်းတော်ည် အလွန်မှပင် ကြီးမားလှပေသည်။ ဗိမ္မာန်တော်၏ အကျယ်အ​ဝန်းဧရိယာသည် စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၀၀၀၀)မျှရှိသည်။ ဗိမ္မာန်တော်အတွင်း၌ အခန်းပေါင်း (၁၁၄)ခန်းရှိပြီး ၎င်းအတွင်းမှ (၆၄)ခန်းသည် အလွန်ပင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဗိမ္မာန်၏ ရင်ပြင်ပရဝုဏ်၌ ရှိ၍ ကျန်အခန်းများမှာ ဒုတိယရင်ပြင်တွင် ရှိနေပေသည်။
သခင်မကြီး(စ.အ)၏အုတ်ဂူသည် ဗိမ္မာန်တော်၏အလယ်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိနေပြီး ထိုအုပ်ဂူသည် တိုင်လေးတိုင်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ငွေထည်များဖြင့်သွန်းလောင်းထားသောလေးထောင့်သဏ္ဌာန် "ဇရီဟ်"တော်အတွင်း၌ရှိနေပေသည်။ ထို"ဇရီဟ်တော်"၏ အပေါ်တည့်တည့်တွင် အမိုးခုံး(ဂွန်ဘသ်)ရှိနေပါသည်။ ဗိမ္မာန်တော်၏နံရံများကို တဝက်အထိ စကျင်ကျောက်များကပ်ထား၍ အခြားတဝက်ကို မှန်စီရွှေချများ ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိုသည်မှာ အီရန်နိုင်ငံသားတို့၏ဗိသုကာလက်ရာများပင်ဖြစ်လေသည်။ ဗိမ္မာန်တော်၏အတွင်းအပြင်၊ မိုနာရာ(မျှော်စင်)နှင့် အမိုးခုံး(ဂွန်ဘသ်)တို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀)က ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီး ရင်ပြင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းတို့ကို လွန်ခဲ့သော နှစ်များ၌ အီရန်နိုင်ငံမှ ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။ သိုစိုင်းန်းအေမာဒ်ဇာဒါဟ်မှ အီရန်နိုင်ငံတော်လှန်ရေးမတိုင်မီအချိန်တွင် ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေခဲ့သော မာစူမ်(၁၄)ပါးတို့၏ ဘဝသမိုင်းကျမ်းတွင်ပါရှိသော အထောက်အထားများအရ သခင်မကြီး(စ.အ)၏ဗိမ္မာန်တော် အဆောက်အဦးကို အီရန်နိုင်ငံဘုရင် ရေဇာရှားဟ် ပဲဟ်လဝီ၏လက်ထက်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက် အီရန်ဘုရင်မကြီး ဖရာဟ် ပဲဟ်လဝီ၏ အမိန့်တော်ဖြင့် ရွှေကပ်ခြင်း နှင့် အလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လစဉ် ဘုရင်မကြီးမှ ပို့ပေးလေ့ရှိခဲ့သည်။
အွမ်မွလ်နဝါအိဘ် (ام‌النوائب )
عقیله بنی هاشم(အကီးလသွလ်ဘနီဟာရှင်မ်)
صدّیقة الصغری(ဆွဒ်ဒီးကသွလ် ဆိုဂရာ)
عالمه غیر معلّمه (کسی که بدون معلم عالم است)(ဆရာထံတွင်ပညာမသင်ယူခဲ့သော ပညာရှင်)
ولیة الله العظمی(ဝလီယွလ္လာဟ်ဟေအွဇ်မာ)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဟဇ်ရသ်သေဇိုင်နဘ်(စ.အ)ညီလာခံ ဝဘ်ဆိုဒ် Archived 13 March 2016 at the Wayback Machine.
အကီလာယေဘနီဟာရှင်မ် ဇိုင်နဘ်ဘေကွဘ်ရာ (စ.အ)ဘဝသမိုင်း)(အလီ(အ.စ)၏သမီးတော် မစ်ဂျီဒ်ဒေကူဖှာတွင် ပေးခဲ့သော မိန့်ခွန်း Archived7April 2014 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇိုင်နဘ်&oldid=706522" မှ ရယူရန်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။